एमसिसी छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ : डा. भट्टराई – रुपान्तर
मुख्य पृष्ठसमाचारएमसिसी छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ : डा. भट्टराई
एमसिसी छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ : डा. भट्टराई
दलीय सझदारी बनाएर यथासीघ्र एमसिसी पास गर्नुपर्ने पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. भट्टराईले सोमबार गृहजिल्ला गोरखाका पत्रकारहरुसँगको भेटमा एमसिसी पास गर्न अलमल गर्नुपर्ने बिषय नभएको तर्क गरे। ‘राजनीतिक दलहरुले छिटो भन्दा छिटो सहमति गरेर यो सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नु नै राष्ट्रिय हितमा हुन्छ’, उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी एक्लैको निर्णयले एमसीसी पास गर्न सम्भव छैन।’